0.0.4 Camera & အသံအင်္ဂါရပ်များ
2.0.0.1 USA တွင်စျေး
Network မှ 2, G / 3, G / 4, G / ဂျီအက်စ်အမ် / HSPA / LTE
display အရွယ်အစား 5.5 inches
နောက်ကျောကင်မရာ Dual 13 megapixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash
ရှေ့ကင်မရာ5megapixels
Motorola Moto X 2017 was rumored and the phone is not announced officially yet but expected announcement will be in April 2017. မျှော်လင့်ထားသည့်အဆိုပါဖုန်းကိုလွှတ်ပေးရန်လိမ့်မည် 2017. ဤတွင်ငါတို့သည်သင်တို့တရားမဝင်ပဏာမသတ်မှတ်ချက်များကိုပြသသွားဖို့ရှိပါတယ်, features and expected Moto X 2017 price in dollar and other popular countries such as USA, ကနေဒါ, တရုတ်နိုင်ငံ, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, ပြင်သစ်, Singapore, ဂျာမနီ, သြစတြေးလျ, ဆော်ဒီအာရေဗျ, အိန္ဒိယ, ပါကစ္စတန်.
Camera & အသံအင်္ဂါရပ်များ
ဝေါဟာရအမည်များ Features Details
နည်းပညာ 2, G / 3, G / 4, G / ဂျီအက်စ်အမ် / HSPA / LTE
အရှိန် HSPA, LTE
GPRS ဟုတ်ကဲ့, Available
EDGE ဟုတ်ကဲ့, Available
SIM ကဒ် Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Resolution 1080 x က 1920 pixels (~401 ppi pixel density)
processor ကို (CPU) Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53
ရှေ့ကင်မရာ5megapixels, LED flash
နောက်ကျောကင်မရာ Dual 13 Megapixels back camera with autofocus, dual-LED (dual tone) flash
သတိပေးချက်အမျိုးအစားများကိုအသံ Vibration; MP3, WAV ringtones
3.5mm jack ဟုတ်ကဲ့
ဂျီပီအက်စ် ဟုတ်ကဲ့, with A-GPS, GLONASS
NFC ကိုနည်းပညာ ဟုတ်ကဲ့
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & Condition and Disclaimer: Motorola Moto X 2017 is Android 7.0 Nougat base smartphone. We are doing daily updates from တရုတ်နိုင်ငံ Local Mobile Phone market and Indian mobile phone market but we can not guarantee that the above given information (only for Prices) on this page is not 100% correct. If you found any changes and want to get more Latest mobile prices Please contact us and provide the updated price of Moto X 2017 32 GB internal phone memory with3GB RAM. We priced the new cell phones and tablets as per international offerings without including shipment and taxes.
next ကိုပုဒ်မ Samsung Galaxy J7 (2016) Price in , ယူအက်စ်အေ, တရုတ်နိုင်ငံ, အိန္ဒိယ & reviews